Sharp AQUOS R Icwecwe: ayinamsebenzi ukuba awuthengisi kakhulu, into ebalulekileyo kukuba bathethe ngawe | Iindaba zeGajethi
Sharp AQUOS R Icwecwe: ayinamsebenzi ukuba awuthengisi kakhulu, into ebalulekileyo kukuba bathethe ngawe
I-Sharp yaseJapan iye yabhaptizwa kwicandelo leefowuni ezikrelekrele kangangexesha elithile. Uqinisekisile ukuba kuphehlelelo ngalunye, amehlo abekwe kwiimodeli zabo. Ngoku, mhlawumbi kuphela kwento abayifumanayo; emva kokumiliselwa, intengiso encinci ifezekisiwe. Oko kukuthi, into ebalulekileyo kukuba bathethe ngawe. Kwaye yile nto ayifumana kwakhona nayo Sharp AQUOS R Icwecwe.
Le modeli yeyona incinci kuthotho lwe-AQUOS. Kwaye iyenza, ewe, kunye nohlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza ye-Android aka Oreo (i-Android 8.0). Inqaku elithanda kakhulu. Okwangoku, isikrini esibonelelwa sisiphelo sendlela ifikelela kwii-intshi ze-4,9 kwaye isisombululo sayo yi-HD epheleleyo + (Iipixels ezingama-2.032 x 1.080). Ngoku, kwiphaneli siya kuba nenye into entsha: fumana ireyithi yokuhlaziya ye-120 Hz. Ke ubumanzi ekusetyenzisweni kwescreen buya kuba bukhulu kakhulu kunoko siqhele ukukubona kwii-mobiles zangoku.
Kwelinye icala, ngaphakathi, le Sharp AQUOS R Compact idibanisa iprosesa ye-Snapdragon 660 i-quad-core kunye nokubaleka kwi-2,2 GHz frequency. I-chip yongezwa nge-3 GB ye-RAM kunye nendawo eyi-32 GB yokugcina iifayile. Ewe ikwanayo nekhadi le-microSD kunye nokunyusa inani lokugcina.
Ngokubhekisele kwikhamera yayo, umva kunye ophambili une- Inzwa ye-megapixel eyi-16,4 kunye netekhnoloji ye-PDAF (isigaba sokufumanisa i-autofocus). Ngayo siya kuba nakho ukudubula ngokukhawuleza ngaphandle kokuphulukana nengqwalaselo elungileyo. Ngeli xesha, ngaphambili siya kuba nenzwa ye-megapixel eyi-8 eya kwenza "isiqithi" kwisitayile esinyulu se-X X. Le Sharp AQUOS R Icwecwe nayo efowuni akukho zakhelo.
Njengokongezwa sinokukuxelela ukuba inenzwa yeminwe; inesidibanisi se-USB-C sokutshaja kunye nokudibanisa izixhobo zangaphandle; Iyamelana namanzi kunye nothuli kwaye ibhetri yayo inegunya loku I-2.500 milliamps enobuchwephesha beTekhnoloji eyi-3.0. Ngelishwa, le Sharp AQUOS R Compact iya kuthengiswa kwilizwe labo lokuzalwa ngoDisemba olandelayo ngexabiso elimalunga ne 320 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Sharp AQUOS R Icwecwe: ayinamsebenzi ukuba awuthengisi kakhulu, into ebalulekileyo kukuba bathethe ngawe
I-Nintendo switch ye-Raspberry Pi esekwe ekhaya iyakwazi ukuqhuba yonke imidlalo ye-retro
Ifowuni ebalulekileyo ka-Andy Rubin yehla ixabiso layo ukuya kwi- $ 499